बिहे हुन् लाग्दा पुर्व प्रेमीले तनाव दिएपछि युवतीले लाइभ भिडियोमै बिष पिएर गरिन आत्महत्या, भिडियो संसार भर भाइरल (भिडियोसहित)
January 27, 2018	Comments Off on बिहे हुन् लाग्दा पुर्व प्रेमीले तनाव दिएपछि युवतीले लाइभ भिडियोमै बिष पिएर गरिन आत्महत्या, भिडियो संसार भर भाइरल (भिडियोसहित)
क युवतीले आफूले विष पिएर आत्महत्या गर्दै गरेको भिडियो रेकर्ड गरेर आफ्ना प्रेमीलाई पठाएको सनसनीपूर्ण घटना बाहिर आएको छ । आफ्ना पूर्व प्रेमीले आफूलाई लगातार ब्ल्याकमेल गरेपछि पीडित बनेकी ती युवतीले आफूले विष पिउँदै गरेको भिडियो रेकर्ड गरेर प्रेमीलाई पठाइन् । लगत्तै विषका कारण उनको मृत्यु भयो । बुधबार बिहान यो घटना भएको बताइएको छ । ती युवतीको १० दिनपछि …
January 27, 2018	Comments Off on आमिर खानको सेक्रेट सुपरस्टारको चीनमा १ साताको कमाइ भारतकोभन्दा सात गुणा बढी!
भारतमा रिलिज भएर एक सातामा जति यो फिल्मले कमायो, त्यसको सात गुना बढी कमाई चीनमा त्यति नै अवधिमा कटायो। ट्रेड एनलिस्ट तरन आदर्शले जारी गरेको विजनेस फिगरले पक्कै पनि आमिरको मुहार चहकाउने छ। पहिलो साता सेक्रेट सुपरस्टारले चीनमा २ सय ९३ करोड भारु कलेक्सन गर्यो। यो फिल्मले भारतमा एक सातामा कूल ३९ करोड ३० लाखमात्र कलेक्ट गरेको थियो। आमिर खानको …
पूजामा कलशको प्रयोग किन र कसरी गर्ने?
January 26, 2018	Comments Off on पूजामा कलशको प्रयोग किन र कसरी गर्ने?
हिन्दू धर्ममा पूजा या कुनै धार्मिक कार्य गर्दा धेरै सामग्रीहरुको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै: पानी, फूल, घन्टी, शङ्ख, कलश आदिको विशेष महत्व हुने गर्दछ । नेपाली संस्कृतिमा कुनै पनि धार्मिक कार्य गर्दा कलशको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । कुनैपनि पूजा, पर्व, संस्कारमा सबैभन्दा पहिले कलश र पूजा बिना कुनैपनि मंगलकार्य शुरू गरिदैन । कलशलाई सबै ब्रह्राण्डको प्रतीक मानिन्छ। कलशलाई पूजा स्थलमा …
January 26, 2018	Comments Off on विश्वको सबैभन्दा महँगो नेल पोलिश, अहिलेसम्म केवल २५ जना खरिदकर्ता
सामान्यतया: महिलाहरुले सुन्दरताको लागि अनेक थरिका उपायहरुको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । महिलाहरुको सुन्दरताको प्रतीकमा नेल पोलिस पनि पर्ने गरेको छ । नेल पोलिस आर्ट आजभोलि व्यापकताको साथ चर्चामा रहने गरेको छ । कुनै कार्यक्रममा जादाँ होस् या कतै बाहिर घुम्न निस्किदा होस् महिलाहरु आफ्नो नेललाई अरु भन्दा भिन्न रुपमा देखाउन चाहन्छन् । आज सम्म तपाईले कति महँगो नेल पोलिसको …
विश्वकै महंगो शालिग्राम चोरी बढ्यो, कालीगण्डकीमा पाईने यसको महत्व यस्तो छ
January 26, 2018	Comments Off on विश्वकै महंगो शालिग्राम चोरी बढ्यो, कालीगण्डकीमा पाईने यसको महत्व यस्तो छ
कालीगण्डकी नदी क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य शालिग्राम ढुङ्गा अहिले हराउन थालेका छन् । शालिग्रामको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्व रहेकाले मानिसले यसकोे खोजी गर्नेहरु बर्सेनि बढेको पाइन्छ । मुस्ताङको कागबेनीदेखि देवघाटसम्म शालिग्राम पाइने भएकाले यस क्षेत्रलाई ‘शालिग्राम क्षेत्र’का रुपमा लिइने गरिन्छ । शालिग्रामलाई हिन्दू धर्मावलीले विष्णुका प्रतीक रुपमा लिई घर तथा मठमन्दिरमा पूजासमेत गर्छन् । शालिग्रामप्रति विदेशीले विशेष चासो राखेर किन्न …
बलिउडका यी ४ नायिका जो बिहे हुनु अगावै आमा बने
January 26, 2018	Comments Off on बलिउडका यी ४ नायिका जो बिहे हुनु अगावै आमा बने
बलिउडका त्यस्ता ४ नायिका छन् जो बिहे हुनु भन्दा पहिला नै आमा बनेका थिए । यो लिस्टमा सबै भन्दा पहिला नाम आउँछ बलिउडकी चर्चित नायिका श्रीदेवीको । श्रीदेवी श्रीदेवीले २ जुन १९९६ मा बलिउडका प्रोड्युसर मोनी कपूर संग खबर अनुसार श्रीदेवीले बिहे भन्दा पहिला आफु आमा बन्न लागेको कुरालाई स्विकारेकी थिइन् । मोनी कपूर संग बिहे गर्दा उनि ७ महिनाको …
जन्मिने वित्तिकै अस्पतालमा साटिए दुई बालक, डीएनए रिपोर्टपछि खुल्यो रहस्य
January 26, 2018	Comments Off on जन्मिने वित्तिकै अस्पतालमा साटिए दुई बालक, डीएनए रिपोर्टपछि खुल्यो रहस्य
पहिला दुई शिशुहरू केही बेरको फरकमा जन्मिन्छन् र त्यसपछि अस्पतालमा गल्तीले साटिन्छन्। दोस्रो कुरा उनीहरू बिल्कुलै फरक पृष्ठभूमिका हुन्। एउटा परिवार आदिवासी हिन्दू हो भने अर्को मुसलमान। यो कुनै चलचित्रको पटकथा जस्तो लाग्छ। उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य असामको परिवारको कथा हो यो। अधिकारीहरूसँगको लामो लडाईँपछि, दुई वर्ष नौ महिनापछि डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट आउँछ- जसअनुसार जुन बच्चा उनीहरू हुर्काइरहेका छन् ती एकअर्काको …
२० वर्ष नपुग्दै ९० वटा नयाँ कुरा पत्ता लगाएर दुनियाँ चकित पार्ने नेपालका कान्छा बैज्ञानिक
January 26, 2018	Comments Off on २० वर्ष नपुग्दै ९० वटा नयाँ कुरा पत्ता लगाएर दुनियाँ चकित पार्ने नेपालका कान्छा बैज्ञानिक
युवा प्रतिभा पुरस्कारका लागि उद्घोषकले १० युवाको नाम पढ्दै गइन्। त्यसैमा थियो, रामु खत्रीको नाम पनि। ठेगाना दोलखा, उमेर २० वर्ष। उनले यति भनेपछि तालीको गडगडाहटले हल गुञ्जयमान भयो। इन्जिनियरिङमा नयाँ खोज र आविष्कार गरेबापत उनलाई युवा प्रतिभा पुरस्कार दिइएको हो। उनी त खुसी थिए नै, कलिलैमा रामु पुरस्कार थाप्न मञ्चमा उक्लदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजन केसी …
यी फिल्म सुपरस्टारहरुलाई बिना देख्दा तपाईले चिन्न समेत सक्नुहुन्न ! हेर्नुस् तस्विरहरु
January 26, 2018	Comments Off on यी फिल्म सुपरस्टारहरुलाई बिना देख्दा तपाईले चिन्न समेत सक्नुहुन्न ! हेर्नुस् तस्विरहरु
बलिउडका निकै ठूला सेलिब्रेटीहरुलाई हामीले कहिल्यै देख्न पाउदैनौं । खासमा साउथ फिल्मका अभिनेतालाई देख्ने हो भने असल जिन्दगीमा पनि सुन्दर छन् भने लाग्छ। तर, यथार्थ बिल्कुलै बेग्लै छ। आज हामीले बलिउड र साउथ इन्डियन फिल्मका अभिनेता र अभिनेत्रीलाई बिना मेकअपका तस्विरहरु देखाउनदै छौँ।
January 26, 2018	Comments Off on इन्टरनेटमा भाईरल यी नर्स, जसको एक झलक पाउन केटाहरुको लाग्छ लाइन [फोटोफिचर]
यो इन्टरनेटको जमाना हो, जहाँ कुनै पनि मान्छे छिन भरमै भाईरल बनेर विश्वभर परिचित बन्छ। अनि कुनै मान्छे छिन् भरमै चर्चा परिचर्चा र सम्मानबाट गिर्न पनि सक्छ। त्यो त घटना, परिस्थिति र संयोगको खेल या भनौँ उपज हो। अहिले इन्टरनेटमा एक नर्सका तस्वीरहरु खुबै पोष्ट, ट्वीट, रिट्वीट तथा शेयर भइरहेका छन् । ताइवानमा बस्ने यी नर्सको नाम निङ चेन लिन …
January 26, 2018	Comments Off on अमेजनमा देखियो अनौठो जीव, विज्ञान जगतमा मच्चियो हलचल
अमोजन यी दिनहरुमा विशेष चर्चामा रहेको छ । अमोजन अहिले चर्चामा रहनुको पछाडी यहाँ पाईएको विशेष प्रजातिको जीव रहेको छ । यसै कारणले विज्ञान जगतमा हलचल आएको छ । जो कोहीले यस जीवको विशेषताको बारेमा थाहा पाए पछि पत्यार नलाग्न सक्छ । एक मिडिया रिपोर्टको अनुसार वैज्ञानिकहरुले अमेजनको वर्षा वनमा पहिलो पटक यस जीवलाई देखेका छन् । सूचना अनुसार यो …
घरमा यस्ता संकेत देखिएमा लक्ष्मी (धन) भित्रिन लागेको भनेर बुझ्दा हुन्छ
January 26, 2018	Comments Off on घरमा यस्ता संकेत देखिएमा लक्ष्मी (धन) भित्रिन लागेको भनेर बुझ्दा हुन्छ
लक्ष्मीले कहिले र कसरी आफ्नो कृपा तपाईहामीमा बर्साउँछिन् त्यो हामी कसैलाई पनि थाहा पाउन निकै मुस्किल पर्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले लाखौ कोशिस गर्दा पनि केही फल नपाएपछी निराशाले घेर्न सक्छ ।शास्त्रका अनुसार केही यस्ता संकेतहरु हुन्छन् जसले तपाईलाई अब तपाईको भाग्य चम्किँदैछ र लक्ष्मीले तपाईको जीवनमा प्रवेश गर्दैछिन् भन्ने थाहा दिन्छ ।केही यस्ता संकेतहरू छन् जसले तपाईलाई तपाईको भाग्य …
Page 18 of 427« First...101617181920»304050...Last »